Guddoomiyaha Baarlammaanka iyo qaar kamid ah murashaxiinta K. Galbeed oo kulmay - Halbeeg News
Guddoomiyaha Baarlammaanka iyo qaar kamid ah murashaxiinta K. Galbeed oo kulmay
MUQDISHO (HALBEEG) – Magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlammaanka Soomaaliya Maxamad Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo toddoba kamid ah murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Kulanka oo ka dhacay xafiiska Guddoomiye Mursal, waxaa qodobbada looga wada hadlay ugu muhiimsanaa doorashada madaxtinimada ee Koonfur Galbeed iyo waliba sidii isbeddel siyaasadeed oo nabad iyo dimuqraadiyad ku salaysni uu gobolka uga hirgeli lahaa.
Murashaxiinta uu Guddoomiyaha Golaha Shacabku qaabilay waxaa kamid ahaa Mukhtaar Roobow oo isagu aan weli si rasmi ah u shaacin inuu murashax madaxweyne yahay, haseyeeshee laga warqabo in uu damac kaga jiro xilka madaxweynaha.
Murashaxiinta waxaa sidoo kale qayb ka ahaa Wasiirkii Hore ee Maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti iyo Wasiir Hore Yuusuf Macalin Amiin Baadiyow oo ay qaraabo dhow yihiin Madaxweyne Shariif Xasan.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Afhayeenka Aqalka Hoose uu murashaxiitna kula dardaarmay in ay midnimada ilaaliyaan islamarkaana ololaha doorashadu uu noqdo mid nabadeed oon carqalad gelin doonin ammaanka iyo xasilloonida deegaannada Koonfur Galbeed.
Doorashada madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhici doonta bisha November ee soo aaddan, waxaana xubnaha tartamaya ugu cadcad madaxweynaha waqtigu kasii dhammaanayo ee Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Mukhtaar Roobow oo horay uga tirsanaan jiray madaxda Ururka Al shabaab.
Shariif Xasan oo isagu qayb ka ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan Koonfurta Soomaaliya, taageerro xoogganna ku leh deegaannada Koonfur Galbeed, wuxuu horay usoo noqday Guddoomiyaha Baarlammaanka Soomaaliya.